ESPN oo shaacisay qayb ka mid ah faah-faahinta heshiiska ay Barcelona u diyaarisay Lionel Messi – Gool FM
(Barcelona) 24 Abriil 2021. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Joan Laporta ayaa lagu soo warramayaa inuu diyaariyay yabooh heshiis kordhin ah oo uu miiska u saari doono Lionel Messi iyadoo wada xaajoodka qandaraas cusbooneysiinta uu haatan meel wacan u marayo wakiillada xiddiga reer Argentina iyo maamulka Barca.
Laporta ayaa diyaariyay dalab uu ku xusan yahay heshiis saddex sano ah, waxaana xusid mudan in Messi qandaraaskiisa uu dhici doono dhammaadka xilli ciyaareedkan, sidoo kalena uu bilaash kaga tagi karo Camp Nou suuqa xagaaga.
Sam Marsden iyo Moises Llorens oo ka howl gala warbaahinta ESPN ayaa sheegay in kooxda Blaugrana ay Messi la hor tagi doonto dalab heshiis ka kooban labo sano iyo sanad dheeraad ah oo isla markaasna ah doorasho, waxaa sidoo kale ay intaas ku dareen in xiddigan uu dhimo mushaharaadka uu ka qaato kooxdiisa, maadaama Barcelona la tacaaleyso xaalado dhaqaale oo aad u daran.
Marsden iyo Llorens ayaa sidoo kale sheegay in Madaxweyne Laporta uu aad ugu kalsoon yahay in kabtanka kooxdooda uu baaqi kusii ahaan doono Camp Nou, isagoo diyaar la ah mashruuc isboorti oo guuleyd sida saxiixyo waaweyn inuu xagaagan kusoo biiriyo safka xiddigaha uu hoggaamiyo Macallin Ronald Koeman.
"Waxa uu kasoo booday dhowr tilaabo, mana uusan u bisleyn shaqada Chelsea" - Jorginho oo weerar ku qaaday macallinkiisii hore ee Frank Lampard